What We Learned When We Listened to Community Voices - McKnight Foundation
Taxane dhageysi quraac ah ayaa la qabtay sanadka 2019 iyada oo qayb ka ah hannaan uruurinta dhinacyo badan taabaneysa oo loogu talagalay inay gacan ka geysato qaabeynta iyo ogeysiinta barnaamijka cusub ee Bulshooyinka firfircoon. Sumcadda sawirka: Molly Miles
Qeybta:Aaladda5 min akhris
Waxa aan baranay markii aan dhegeysannay codadka bulshada
Markii Mu'asasada 'McKnight Foundation' ay bilawday sameynta barnaamij cusub oo loo hibeeyay sinnaanta iyo ka mid noqoshada gobolkayaga, waxaan ku baraarugnay ka qeyb qaadashada xikmadda iyo khibradda shaqsiyaadka iyo jaaliyadaha ka baxsan gidaarada Foundation inay kordhiso mudnaanta barnaamijka, kalsoonida, iyo waxqabadka. Markii aan u soo dhowaanno bilawga daahfurka dadweynaha ee tilmaamaha-deeq-bixiyaha deyrtan deyrta, waxaan ku faraxsanahay inaan soo sheegno waxa guddiga iyo shaqaalaheena ay maqlaan iyo wax baranayaan.
Qaabab Kala Duwan ee Raadinta Wax Soo Saarka Bulshada Dhexdeeda
Dhamaadka Oktoobar 2019, McKnight wuxuu bilaabay geedi socod ku-uruurineed oo dhinacyo badan leh oo loogu talagalay in lagu caawiyo qaabaynta iyo wargelinta cusub ee Aasaaska Barnaamijka Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah. Iyadoo taariikhda McKnight, Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, iyo khibradda shaqaaluhu inay yihiin gundhig muhiim ah oo tixraac ah, Foundation waxay uruurisay fikrado ka badan 1,000 daneeyayaal ah, oo matalaya qaybo kala duwan oo dadka, meelaha, waaxaha, iyo ururada Minnesota iyo wixii ka dambeeya.
Hawsha waxaa ku jiray afar qaybood:
Sooryo dhagaysi taxane ah
Wareysyo qaabeysan oo lala yeeshay hogaamiyaasha maxalliga ah iyo kuwa heer qaran
Kulamada waxaa qaban qaabiyay wada-hawlgalayaasha ka hawlgala Greater Minnesota iyo Minneapolis – St. Aagga metrooga ee Paul
Su'aalo toos ah oo khadka tooska ah looga heli karo
Waxaan uga mahadcelineynaa fikradaha qiimaha leh ee dhammaan dadkii ka soo qeybgalay waxaan si daacadnimo leh ugu mahadcelineynaa deeqsinimadooda si ay ula wadaagaan waqtigooda, khibradooda, iyo aqoontooda. Waxaan mudnaan siiney shaqadan maxaa yeelay waxaan ogayn in ku lug lahaanshahan qaabab kala duwan oo aqoon leh- khibrad nololeed iyo aqoon durugsan iyo mowduuc aqoon u leh xasuustii awoowayaasha iyo xiriirrada bulshada ku saleysan — ayaa naga dhigaysa mid caqli leh, iyo istiraatiijiyadeena mid aad u habboon oo wax ku ool ah.
Waxaan rajeynaynaa inay waxbarashadani soo noqoto oo ay dadka kale siiso aragti ku saabsan waxa ay u baahan tahay si loo hormariyo bulshooyinka loo wada dhan yahay oo loo wada siman yahay ee Minnesota.
Qaar ka mid ah Mawduucyada Muhiimka ah ee Wada-hawlgalayaasha ayaa kor loo qaaday
Si loo taageero geedi socodkayaga, McKnight wuu la shaqeeyay Xalka Safka Hore, shirkad wadatashi istiraatiijiyadeed oo heer qaran ah. Kooxdoodu waxay gacan ka geysatay qaabeynta hanaanka, wareysiyada qaabeysan ee lala yeesho hogaamiyayaasha maxalliga ah iyo kuwa qaran iyo marti gelinta kulan maalinle ah oo dib u eegis ah oo lala yeesho la taliyayaasha qaranka. Waxay sidoo kale abuureen a falanqayn kooban dhammaan dadaalada hawlgelinta. Waxa ku jira, waxay ka soo saareen saddex mawduuc oo muhiim ah si ay ugu wargeliyaan deeq-bixiyahayaga mustaqbalka:
Fahmitaanka xiriirka samafalka iyo awooda, iyo sida aan si qoto dheer uga fikiri karno sida awooda loo qaban karo ama loo wadaagi karo (falanqayn);
Sare u qaadista taasi sida McKnight wuxuu qabanayaa shaqadu waa muhiim waa maxay waxaan dooranay inaan diirada saarno (habka); iyo
Fikradaha istiraatiijiyadeed ee gaarka ah ee McKnight uu diirada saari karo inuu dhiso beel aad u firfircoon oo sinnaan ku dheehan tahay ee Minnesota (hirgelinta).
Shirarka ay qabanqaabiyeen Machadka McKnight Foundation iyo Southwest Initiative Foundation ee 2019 waxay soo ururiyeen talooyin si ay u matalaan qaybaha kaladuwan ee dadka, meelaha, qaybaha, iyo ururada Minnesota iyo wixii ka baxsan. Sumcadda sawirka: Molly Miles
Wada-hawlgalayaashayada Jaamacadda Minnesota ee Xarunta Magaalada iyo Arrimaha Gobolka (CURA) waxay naga caawisay inaan aruurinno oo aan soo koobno xogta xog-ururinta internetka. Waa tan iyaga warbixin buuxda.
Markii aan dib u eegis ku sameyneyna natiijooyinka dadaalladaan oo dhan, waxaan maqalnay talo bixinno kala duwan oo ku saabsan aagagga lagu caawin karo, sida guryaha la awoodi karo, lahaanshaha bulshada, abaabulka bulshada, iyo saameynta maalgashiga. Kaqeybgalayaashu waxay xustay is-goysyada badan ee u dhexeeya dhaqdhaqaaqa cimilada iyo shaqada sinnaanta, gaar ahaan fursadaha shaqooyinka tamarta nadiifka ah iyo hawada nadiifka ah ee kuwa sida aadka ah culeyska u ah culeyska cimilada. Waxaan sidoo kale maqalnay doorka muhiimka ah ee farshaxanka iyo waaxda dhaqanka ay ka ciyaari karaan horumarinta bulshooyinka firfircoon iyo caddaaladda.
Intaa waxaa sii dheer, kaqeybgalayaashu waxay nagu dhiirrigeliyeen inaan si dhab ah ula qabsanno waxay u qaadaneyso McKnight sidii loo hirgalin lahaa barnaamijkeenna cusub ee aan ku waafajineyno ballanqaadkeenna xagga kala-duwanaanta, sinnaanta, iyo ka-mid-noqoshada. Tani waxay saamayneysaa xiriirka aan la leenahay hoggaamiyeyaasha bulshada, sida aan u qaabeyno geedi socodka deeq-bixiyeyaasha, iyo sida aan u qeexno qiimeynta iyo saameynta. Sida aan uga soo muuqanno goobahan ayaa muhiim u ah sida istiraatiijiyad ahaan ay u raadinayaan barnaamijyada Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta.
Waxa aan ka baranay ka-hawlgalkani wuxuu qaabeeyaa fikirkeenna, wuxuu xoojiyaa horumarinta istiraatiijiyadeena, iyo wuxuu saameyn ku yeeshaa sida aan ugu nuuxnuuxno tilmaamahayaga maalgelinta iyo mudnaanaha. Waxaan rajeyneynaa in tani ay si cad u noqon doonto deyrta markaan dejineyno tilmaamaha barnaamijka cusub iyo ugu dambeyntii, marka aan bilowno bixinta deeqaha ugu horreeya.
Marka lagu daro saameyn ku yeelashada horumarinta istiraatiijiyadda, hanaanka laftiisu wuxuu dhaliyay in la kordhiyo go'aan qaadashada lagu biirinayo kaqeybgalka bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka cusub ee Bulshadeena Vibrant & Sinnaanta. Xitaa iyada oo la amrayo joogitaanka guriga-ee uu u baahan yahay masiibada Covid-19, waxaan ku mashquulinay hoggaamiyeyaasha bulshada afar wada-hadal oo “fikirka” ah oo ku saabsan jihada istiraatiijiyadeed ee suurta galka ah ee loo maro Zoom. Wadahadalladani waxay xaqiijiyeen wixii aan ka baranay ka-hawlgalkeennii jiilaalkii la soo dhaafay waxaanan ku daray heerar cusub oo falanqayn ah oo noo oggolaaday inaan sii xoojinno istiraatiijiyadda horumarinta.
Waxaan sii wadnaa in aan ka fikirno waxa ay u baahan tahay si aan u dhisno awooddeena gaarka ah si aan ugu biirino fikradaha aan wadaagno ee barashada barnaamijka socda iyo la qabsiga. Waxaan naqshadeynay habab taageeraya baaritaanka waqtiga-dhabta ah, u adeegista qoto dheer ee ku dhegan arimo ama qarsoon, iyo xirmo jawaab celin ah oo ka timid deeq bixiyaasha iyo la-hawlgalayaasha. Waxaan rajeyneynaa in dadaalada aan wax ku barano oo aan ka helno la-hawlgalayaashayada ay ka faa'iideysan doonaan labadaba McKnight iyo deeq-bixiyeyaashayada iyo shuraakadayada, maadaama aan helno qaabab si wada jir ah aan ula wadaageyno waxa aan aragno, sameyno, iyo barashada.
McKnight wuxuu soo dhoweeyay David Nicholson inuu noqdo agaasimaha barnaamijka jaaliyadaha Vibrant & Sinnaanta
Geeddi-socodka Habka Naqshadeynta Barnaamijyada Bulshada Soo-koobinta Wax-ku-oolliyeyaasha
Warbixinta Abriil 2020
Sahanka Sahanka Saami-qeybsiga CURA-McKnight
Sahamin Janaayo 2020